Servo mota magineti vagadziri uye vanotengesa | Horizon
Servo mota magineti kana Neodymium magineti e servo mota ine yayo yakasarudzika uye yepamusoro performance mhando kusangana neyakaomarara mhando chinodikanwa che servo motors. Servo mota inoreva mota yemagetsi iyo inodzora mashandiro emagetsi emuchina mu servo system. Iyo isina kunanga kumhanyisa shanduko mudziyo weanobatsira mota. Iyo servo mota inogona kuita kudzora kwakaringana kumhanya uye chinzvimbo chakaringana, uye inogona kushandura iyo voltage chiratidzo kuva torque nekumhanyisa kutyaira chinhu chekutonga. Iyo rotor kumhanya kweservo mota inodzorwa neyakaiswa chiratidzo uye inogona kuita nekukurumidza.
Sezvo iyo Indramat bazi reRexroth rakaparura zviri pamutemo MAC zvachose magineti AC servo mota uye dhiraivha system kuHannover yekutengeserana mu 1978, izvi zvinoratidza kuti chizvarwa ichi chitsva cheAC servo tekinoroji chakapinda muchikamu chinoshanda. Pakati nepakati uye pakupera kwema1980, kambani yega yega yaive nemhando yakakwana yezvigadzirwa. Iyo yese servo musika iri kutendeukira kune AC masystem. Mazhinji epamusoro-mashandiro emagetsi servo masystem anoshandisa zvachose magineti anowirirana AC servo mota, uye mutyairi wekutonga kazhinji anotora izere dijitari chinzvimbo servo system nekukurumidza uye kwakaringana kumisikidza. Iko kune zvakajairika vagadziri senge Nokia, Kollmorgen, Panasonic, Yaskawa, nezvimwe.
Nekuda kwekuita chaiko kweservo mota, ine inodzvinyirira inodikanwa pamusoro pekushanda nemazvo uye nekuita kwepamusoro, izvo zvinowanzoenderana nemhando yemagineti eNeodymium eema servo motors. Nekuda kwenzvimbo dzakasiyana siyana dzemagineti, Neodymium magineti inoita kuti servo motors dziite nehuremu hwakaderera uye saizi diki kana ichienzaniswa neyechinyakare magineti zvinhu, senge Ferrite, Alnico kana SmCo magineti.
Kune maServo mota magineti, parizvino Horizon Magnetics ari kuburitsa akateerana epamusoro magumo mamakisi eNeodymium magineti, seH, SH, UH, EH uye AH ane anotevera matatu maitiro:
1.High yemukati yekumanikidza Hcj: yakakwira kusvika> 35kOe (> 2785 kA / m) iyo inowedzera magineti demagnetizing kuramba uyezve servo mota inoshanda kugadzikana
2.Low inodzoreka tembiricha coefficients: yakaderera kune α (Br) <-0.1% / ºC uye β (Hcj) <-0.5% / ºC iyo inowedzera magineti tembiricha kugadzikana uye inovimbisa servo motors kuti ishande nepamusoro kugadzikana.
3.Kuderedza uremu: pasi kusvika 2 ~ 5mg / cm2 muHAST mamiriro ekuyedza: 130ºC, 95% RH, 2.7 ATM, mazuva makumi maviri ayo anowedzera magetsi ekuramba kurwisa kuti awedzere hupenyu hupenyu hweservo motors.
Pashure: Elevator Magineti
Zvadaro: Ruvara Magnetic Push Pini
Inokurumidza mota Magineti
Linear mota Magineti